Inona no mandrahona ny ala honko ao Tobago? · Global Voices teny Malagasy
Mijaly noho ny "fahatrotrahana" ny ala honko.
Voadika ny 25 Septambra 2021 4:41 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Português, Español, Ελληνικά, English
Sargassum; sary avy amin'i bibliomaniac15 tao amin'ny Flickr, CC BY 2.0. Sargassum; photo by bibliomaniac15 on Flickr, CC BY 2.0.
Ity lahatsoratra ity dia nosoratan'i Sean McCoon ary navoaka voalohany tao amin'ny Cari-Bois News. Navoaka eto indray ny endrika nasiam-panovana ho ampahany amin'ny fifanarahana fizarana votoaty amin'ny Global Voices.
Nametraka tranga hanaovana famotopotorana vao maraina hotontosain'ny ekipa mpiaro ny tontolo iainana ao amin'ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana (FTMF) Environment Tobago ny tsio-drivotra maivana saingy maimbo manavatsava ny ala honko tany Atsimo-Andrefan'i Petit Trou Lagoon ao Tobago. Nisy ny zavatra nanakorontana ny tamba-tontolo iainan'ny faritra ka nahafaty ireo hazo, ka te-hahafantatra izy ireo hoe inona izany.
Nanomboka ny volana Aogositra, namoaka tatitra maromaro momba ny toetry ny ala honko ny FTMF; nanambara avy hatrany ny fanadihadiana nataony fa nijaly noho ny toe-javatra fantatra amin'ny hoe “fahatrotrahana”, aretina iray miantraika amin'ny zavamaniry hazo izay miavaka amin'ny fahafatesana tsikelikelin'ny rantsankazo, sampana, laingo na faka, manomboka amin'ny tendrony.
Raha nahita anton-javatra maromaro nandrahona ny fahasalaman'ny ala honko ny ekipa, anisan'izany ny fanariana fako mivaingana avy amin'ny fako an-tokantrano sy ara-barotra, sy ny tsy fandehanan'ny mpitaty ny rano maloto avy any tokantrano sy toeram-pivarotana araka ny tokony ho izy, dia hita fa tompon'andraikitra tamin'ny fofona tafahoatra sy ny fahasimbana ny fahabetsahana tafahoatra ny sargasioma, ahidrano madinidika dia madinika miloko volontsôkôlà mitsinkafona malalaka, mivadika haingana nomena ny anarana hoe Ranomasina Sargasso izay niaviany. Miangona amin'ny toerana voafetra, mihasimba, mamoaka etona mampidi-doza sy manakorontana ny voaritontolo ny fakon-tsargasioma ka lasa tsy fahita firy intsony ankehitriny ireo foza avy amin'ny ala honko marobe taloha.
Araka ny filazan'ny Profesora Mona Webber, talen'ny Ivotoerana momba ny Siansa an-dranomasina ao amin'ny Oniversiten'i Antilles, Mona Campus, Jamaika, lasa misy poizina ny fiangon'ny sargasioma any amin'ny ala honko sy ny tsikafon'ahidrano rehefa manomboka lò, mamoaka silfiora hidrozèna ary mamono ireo voaritontolo ireo.
Momba an'i Petit Trou, ny porofon'ny fisehoan'ireo famoahana etona ireo dia hita tamin'ny fialan'ny loko tamin'ireo fantsika niara-nitazona ny gorodom-pitsangatsanganana ankafizina ao amin'ny faritra, izay miasa ho tambajotra tsara lamina manerana ny ala honko manamorona ireo toeram-pampivoarana fambolena Tobago, toeram-pihaonan'olona ahitana trano maromaro fialan-tsasatra sy toerana fanaovana golf. Hita mifampihosina amin'ireo trano mirentirenty ankehitriny ny tazana sy ny fofon'ireo ala honko simba.
Na dia mihevitra aza ny ekipa ao amin'ny Environment Tobago fa tokony hokarakaraina mitovy amin'ny ambin'ireo trano (mirentirenty) ny voaritontolo sy ireo faritra marefo ara-tontolo iainana sy ny manodidina, tsy nanome antoka toy izany ny “zava-misy henjana” tamin'ny fitsidihana ny toerana. Mampiseho ny ala honkony ho fitobahana isa-taona amin'ny fako sargasioma ny toerana misy ny riakasia (farihy amoron-dranomasina) manamorona an'i Atlantika. Miteraka voka-dratsy marobe ity sakana ity, ka manimba ny fahaveloman'ny ala honko sy ny zava-boahary izay misy any amin'ny faritry ny rano amin'ny tontolo iainana ny sasany amin'izany.
Ny andraikitry ny ala honko amin'ny hetsika toetrandro
Ahitana loharano voajanahary manankarena sy isan-karazany marobe ary fonenan'ny karazan-javaboary isan-karazany tsimanampaharoa ny ala honko. Miantoka ny fifandraisana akaiky eo amin'ny tontolo iainana an-dranomasina sy an-tanety ireo ala ireo, ary koa manome fitoniana tsy ho an'ny akanin'ny honko ihany, fa koa ho an'ny tontolo iainana amoron-dranomasina hafa mifandraika amin'izany, toy ireo ahidrano sy haran-dranomasina, toy ny tranga any Bon Accord Lagoon, izay miorina miaraka amin'ny morontsiraka atsimo andrefan'ny nosy.
Mitàna andraikitra lehibe amin'ny famenoana indray ny trondro isan-karazany, na ho an'ny karazan-trondro amoron-dranomasina na ny trondro an-driakasia ireo tontolo iainana ireo. Entin'ny onja misondrotra ao amin'ireo ranomandeha amoron-dranomasina ireo otrikaina nalefa any amin'ny riakasia toa fako avy amin'ny voaritontolon'ny ala honko.
Nandray ny filozofian'ny “aleo misoroka toy izay mitsabo”, mihevitra ny Environment Tobago fa mila dinihana lalina ny rafitra politikan'i Tobago amin'ny famahana ny olana toy izany. Zava-dehibe ihany koa, manandratra ny teniny amin'ny fampiharana tsara kokoa ny lalàna momba ny tontolo iainana misy eo amin'ny sehatra nasionaly izy ireo, ary manamarika fa “Tonga ny fotoana hisian'ny sazy henjana amin'ireo tratra mandika lalàna.” Nilaza ihany koa ny vondrona fa fotoana izao hamahana ny olan'ny fanariana fako mivaingana avy any amin'ny tokantrano sy ara-barotra mankany anaty ala honko izay, miampy tsy fandehanan'ny mpitanty fanariana rano maloto avy any an-tokantrano na ara-barotra, ho “kasinga iray lehibe iray tokony hoheverina amin'ny iraka rehetra hanavotana ny ala honko ao Tobago “:
Tokony hatao laharam-pahamehana ny hetsika fiarovana toetrandro amin'ny alàlan'ny fikirizana hanangana, fikojakojana ary ny hamehana hanabe ny vahoaka sy ireo mpandray anjara rehetra tsy ao anatin'i Tobago ihany, fa eo amin'ny sehatra nasionaly sy any amin'ny renim-paritra ihany koa.
Tsara toerana i Tobago, izay [nosy] kely kokoa ao amin'ny repoblika nosy kambana [Trinidad sy Tobago], ho ohatra iray amin'ny mety ho fiarahamonina mahazaka sy miaro ary mavitrika amin'ny toetrandro. Na izany aza, toa resin'ny fahasimbana haingana sy ny fanimbana ny voaritontolo saro-pady i Tobago. Anjaran'ny manampahefana, ny fiarahamonim-pirenena ary ny olom-pirenena ankapobeny ny mahatakatra ny lanjan'izy ireo sy miambina amin'ny fomba saro-piaro izay tavela amin'ny fanomezan'ny natiora antsika.
Tena ilaina ho an'ny fahaela velon'ny zava-manan'aina sy ny olombelona araka ny ahafantarantsika azy eto an-tany ny fijerena indray ireo laharam-pahamehantsika mba hahatakarana tsara ny maha zava-dehibe ny voaritontolo.
Taloha i Tobago dia tena nandroso tokoa teo amin'ny resaka tontolo iainana, nametraka zavatra mba hiarovana ny Main Ridge, tahiry ala tropikaly tranainy indrindra ao amin'ny ilabolantany andrefana. Vao haingana ny faritra no notendrena ho “Tahiry Biosfera sy Olombelona -Man and the Biosphere Reserve” an'ny UNESCO. Hatreto anefa, tsy mbola nahazo valiny momba ny tatitra mikasika ny ala honko avy amin'ny Antenimieran'i Tobago, sampana fitantanan-draharaha ao amin'ny nosy, na ny fahefana hafa ao Tobago isika.
2 herinandro izayJamaika
4 herinandro izayJamaika